Indawo kaBob - Ukubukwa kwebhishi ngamamayela azungezile! - I-Airbnb
Indawo kaBob - Ukubukwa kwebhishi ngamamayela azungezile!
Sikholelwa ukuthi i-Bob's Place iyindlu esendaweni engcono kakhulu eNhlonhlweni enhle yaseFleurieu!
Itholakala khona kanye eMiddleton Point ngokubukwa okungu-180 degree, lena indawo ekahle yokuntweza, ukubuka imikhomo kanye nokuhlola indawo enhle ezungezile oGwini OluseNingizimu.
Muva nje nangothando, le ndlu yasolwandle ethokomele nethokomele isineminyaka engaphezu kwengu-30 emndenini wethu futhi sibheke ngabomvu ukwabelana ngayo nezivakashi zethu.
Izinsuku zokuvala zisebenza ngomhlaka-19 - 23 Novemba 2020.
I-Bob's Place iklanyelwe ukuba yindlu encane ethokomele futhi siyihlelile ukuze ibe ntofontofo ngangokunokwenzeka - okudingeka ukwenze ukuhlala uphumule futhi ujabulele ukubuka….Sithemba ukuthi uyavuma ukuthi ukubuka okuvela egumbini lokuphumula nangaphambili i-deck iyona engcono kakhulu!
Kunamagumbi okulala amathathu atholakalayo aneshawa eyodwa nezindlu zangasese ezimbili. Kukhona ama-air conditioner amabili abuyela emuva - emakamelweni okulala 1 no-2 plus amafeni osilingi kuwo wonke amagumbi. Kukhona futhi ama-heaters amabili ekholomu kawoyela atholakalayo ukuze uwasebenzise.
Sicela uqaphele ukuthi uzodinga ukuthi uze nawo wonke amalineni akho, okuhlanganisa amathawula, amashidi ombhede namakhava e-duvet/doona namakesi omcamelo. Uma udinga ilineni ngaphambi kokufika kwakho lokhu kungahlelwa ngokuqondile ne-Sea Breeze Services ku-08 7522 4917.
I-Duvet/doonas kanye nemicamelo kuyahlinzekwa.
Elinye lamabhishi angcono kakhulu ogwini oluseNingizimu, iMiddleton iyindawo ongaya kuyo ukuze uthole indawo yokubalekela yomndeni elandelayo noma i-surfing safari. Emindenini, amabhishi aseduze e-Goolwa, e-Horseshoe Bay ahamba phambili kwezingane ezisacathula nentsha ngokufanayo. I-Middleton Beach ilungele abasaqalayo kwabatshuzi abathuthukile.
Ziningi izinto okumele zenziwe emadolobheni endawo asogwini lwasePort Elliot, eVictor Harbour naseGoolwa kanye nasezindaweni ezizungezile eNhlonhlweni yaseFleurieu.
Edolobheni laseMiddleton ngokwalo - futhi ebangeni elilula lokuhamba - kunesitolo sokubhaka, indawo yokucima ukoma/isitolo samabhodlela, isitolo sendawo sedili/ezilula, isaluni yezinzipho kanye nekhemisi. Kukhona nezinkantolo zethenisi zasendaweni eziqashwa e-Abbotts Reserve e-Ellensford Terrace engemuva kwepaki yekharavani futhi egijima eduze komugqa wesitimela. IMiddleton ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokubuka imikhomo ngasogwini. Kukhona inala yamanye amakhefi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zobumnandi kulo lonke ugu phakathi kweGoolwa neVictor Harbour.
Siyatholakala ngocingo ukuze silawule noma imiphi imibuzo, izinkathazo noma izinkinga okungenzeka ube nazo ngaphambili, phakathi noma ngemva kokuhlala kwakho.
Sicela uthumele i-imeyili noma ushayele uSamantha uma unezinkinga ngokubhuka kwakho, noma ngenkathi usahleli endlini. Uma engakwazi ukuzixazulula ngocingo noma nge-AirBnB, omunye othintana naye endaweni uCharles futhi imininingwane yakhe isesididiyelini sendlu.
Futhi esihlokweni sendlu - esizokuthumelela sona nge-imeyili cishe isonto ngaphambi kokufika kwakho - kukhona ulwazi oluningi mayelana nendlu nezinto okufanele zenziwe endaweni.